Ihe llema Aka Azụmaahịa na Ohere Na COVID-19 Gbasara Ọrịa | Martech Zone
Ihe llema Aka Azụmaahịa na Ohere Na Ahụhụ COVID-19
Tuesday, October 6, 2020 Tuesday, October 6, 2020 Douglas Karr
Ruo ọtụtụ afọ, ekwuputala m na mgbanwe ahụ bụ naanị oge ọ bụla ndị ahịa kwesịrị inwe ntụsara ahụ. Mgbanwe ndị na-emepụta nkà na ụzụ, ndị na-ajụ ase, na ọwa ndị ọzọ rụgidere òtù dị iche iche iji gbanwee ihe ndị ahịa na azụmahịa chọrọ.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-amanye ụlọ ọrụ ka ha doo anya na mmadụ na mbọ ha. Ndị ahịa na azụmaahịa malitere ịme azụmahịa iji kwekọọ na nkwenye ha na ọdịmma ha. Ebe otu ndi otu na-ekewa ntoala ha na oru ha, odi ugbua bu na ebum n’uche otu a bu ka oganihu obodo anyi na kwa ilebara gburugburu anyi anya.
Ma ọdachi ahụ metụtara yana mkpọchi mkpọchi a manyere mgbanwe na-atụghị anya ya nke anyị na-atụghị anya ya. Ndị ahịa na-emebu ihere ịnakwere e-commerce jikọtara ya. Ebe ndị metụtara mmekọrịta dịka ebe mmemme, ụlọ nri, na ebe nkiri sinima kwụsịrị ọrụ - a manyere ọtụtụ imechi kpamkpam.
COVID-19 Mgbagha Azụmaahịa
E nwere ụlọ ọrụ ole na ole ndị ọrịa na-efe efe, na-akpaghasị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na mgbanwe na-azụ ahịa na omume ha. Achọpụtala m onwe m ụfọdụ nnukwu swings na ndị ahịa na ndị ọrụ ibe:
Otu onye ọrụ ibe m na nchara nchara hụrụ condominiums na mkpọsa mkpọsa na ụlọ nkwakọba ihe ecommerce kpaliri ọganihu niile nke usoro ya.
Otu onye otu ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ kwesịrị ịmanye ndị ahịa ha niile ahịa ka ụlọ akwụkwọ na-aga n'ịntanetị.
Otu onye ọrụ ibe na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-azụgharị ahịa iji mezigharị oghere ya ka ọ dịrịkwuo mfe ịnabata usoro ọrụ mgbanwe ebe ndị ọrụ na-anabata ọrụ ugbu a n'ụlọ.
Ọtụtụ ndị ọrụ ibe gị na ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ closedụ mechiri ụlọ nri ha wee gbanwee naanị iji wepụta na nnyefe ahịa.
Otu onye ọrụ ibe ya ghazigharịrị ụlọ spa ya maka ndị ọbịa naanị ya na-ehicha windo n'etiti ndị ahịa. Anyị mepụtara ecommerce zuru ezu na ịhazi usoro ihe ma bido ahịa ahịa, ịre ahịa email na usoro ọchụchọ mpaghara - ihe ọ na-adịghị mkpa tupu oge ọ bụla n'ihi na ọ nwere ọtụtụ okwu ọnụ.
Otu onye ọrụ ibe m n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka imeziwanye ihe n'ụlọ eleela ndị na-ebubata ngwaahịa na-akwụ ụgwọ na ndị ọrụ na-achọkwu ụgwọ n'ihi na ọchịchọ iji melite ụlọ (ebe anyị bi ugbu a na ọrụ) na-etinye ego etinye ego na ya.
Ọbụna ụlọ ọrụ ọhụrụ m ga-emezigharị ahịa na ahịa ya. N'afọ gara aga, anyị rụsiri ọrụ ike n'inyere azụmaahịa dijitalụ aka ịgbanwe ahụmịhe ndị ahịa ha. N'afọ a, ihe niile gbasara akpaaka n'ime, arụmọrụ, yana izi ezi nke data iji belata ọrụ ndị ọrụ na-ahapụbeghị.
Ihe omuma a site na Ekwentị 360, onye na-eweta SMS dị ọnụ ala maka ndị nta, ọkara, na nnukwu azụmaahịa na-akọwa mmetụta nke ọrịa na mkpọchi na mbido, azụmaahịa na azụmaahịa n'ụzọ zuru oke.
Ihe mmetụta akụ na ụba ọjọọ nke COVID-19
Ihe kariri 70% nke ndị nwere mmalite ga-akwụsị ọrụ ndị ọrụ oge niile kemgbe mmalite nke ọrịa a.
Ihe karịrị 40% nke ndị na-ebido naanị nwere ego zuru ezu maka arụmọrụ otu ọnwa ruo ọnwa atọ.
GDP ejirila 5.2% mee ihe na 2020, na-eme ka ọ bụrụ nhụjuanya zuru ụwa ọnụ n'ime ọtụtụ iri afọ.
Ohere Ohere COVID-19
Ọ bụ ezie na ọtụtụ azụmaahịa nọ n'oké nsogbu, enwere ohere ụfọdụ. Nke a agaghị eme ka oria a na-efe efe dajụọ - nke jọgburu onwe ya. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ achụmnta ego enweghị ike ịtinye akwa ahụ. Mgbanwe ndị a dị egwu na mpaghara azụmaahịa akpọnwụghị ihe niile - ọ bụ naanị na azụmaahịa ga-adị mkpa iji debe onwe ha.
Businessesfọdụ ụlọ ọrụ na-ahụ ohere ịgbanwe etu ha si arụ ọrụ:
N'ịnabata ụdị ọrụ ebere iji nye ihe ndị dị mkpa na uru nye ndị nọ na mkpa.
Arụ ọrụ iji nweta uru nke ọnụọgụ mmadụ na-arụ ọrụ site n'ụlọ nke chọrọ nnyefe nke nri na ngwa ahịa.
Ivkwalite ịzụ ahịa iji gbanwee ọchịchọ site na nleta nleta ịzụ ahịa gaa nleta dijitalụ na usoro ịntanetị, ecommerce, na nhọrọ nnyefe.
Manufacturingmepụta nrụpụta na-enyekwa ihe ọcha na akụrụngwa nchekwa onwe onye.
Gbanwe oghere ọrụ ghere oghe na oghere ndị na-ekewapụ onwe ya na nke onwe, nkewa ngalaba iji belata mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Mara otu esi azaghachi ọnọdụ a ga-enyere ụlọ ọrụ gị aka ịnagide ọrịa a na-efe efe. Iji mee ka ịmalite, ntuziaka dị n'okpuru ga-atụle nsogbu ndị ị ga-eche ihu ma ọ bụ ikekwe ị ga-eche ihu na ohere ị kwesịrị ịtụle ịnara.
Lọ ahịa na etiti COVID-19: Ihe ịma aka na ohere
Nzọụkwụ isii iji kwalite azụmahịa gị
Ndị ọchụnta ego kwesịrị imeghari ma nakwekwa, ma ọ bụghị na a ga-ahapụ ha. Anyị agaghị alaghachi na arụmọrụ tupu 2020 dị ka azụmaahịa azụmaahịa na omume gbanwere ruo mgbe ebighi ebi. Nke a bụ usoro isii Mobile6 na-atụ aro iji nyere gị aka ikpebi ihe ndị otu gị nwere ike ime iji gaa n'ihu ọnọdụ ndị ugbu a:
Ahịa Ndị Ahịa Research - were miri emi banye na ndị ahịa gị. Gwa ndị ahịa gị kachasị mma ma zipụ nyocha anyị iji mata otu ị nwere ike isi nyere ndị ahịa gị aka.
Mee ka ndi oru na-agbanwe agbanwe - ịchụpụ ndị ọrụ na ndị ọrụ ngo nwere ike ịbụ ohere kachasị mma iji belata ụgwọ ọrụ akwụ ụgwọ nke nwere ike imetụta usoro ego ụlọ ọrụ gị.
Maapụ Si Chain Gị - Tụlee adịghị ike logistical azụmahịa gị na-eche ihu. Kedụ ka ị ga - esi kwado ma rụọ ọrụ gburugburu ya?
Mepụta Uru Ekekọrịta - E wezụga onyinye gị, kwue mgbanwe dị mma nzukọ gị na-eweta n’obodo ya yana ndị ahịa gị.
Nọrọ uzo - nakweere usoro nkwukọrịta doro anya ma nwee nchekwube nke na-eme ka onye ọ bụla gbagoo, gbadata ala, ma na nzukọ gị ghọtara ọnọdụ azụmahịa gị.
Digital Mgbanwe - mee ka ego gị dịkwuo elu na nyiwe dijitalụ, akpaaka, mwekota, na nchịkọta iji bulie arụmọrụ gị. Nrụ ọrụ dị n'ime site na ahụmịhe ndị ahịa nwere ike inyere gị aka imeri na ọbụna nwekwuo uru dị ka azụmaahịa na ndị na - azụ ahịa n'otu aka ịgbanwe omume ha.
Tags: azụmahịaCOVID-19gdpinfographicmkpọchiọnụego mkpọchiEkwentị 360ọrịaọnụọgụ ọrịa na-efe efeSMS